अध्याय ५२ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
म धार्मिकताको सूर्यको रूपमा प्रकट हुन्छु, अनि तिमीहरू र म सदासर्वदा महिमा र असल आशिषहरूमा सहभागी हुन्छौं! यो एउटा अपरिवर्तनीय तथ्य हो, र यो तिमीहरूमा पुष्टि हुन सुरु भइसकेको छ। किनकि मैले प्रतिज्ञा गरेको सबै कुरा, म तिमीहरूको निम्ति पूरा गर्नेछु; मैले भन्ने सबै कुरा वास्तविकता हुन्छ, र यो कहिल्यै रित्तो हुनेछैन। यी असल आशिषहरू तिमीहरूमाथि छन्, अनि अरू कसैले त्यसलाई दाबी गर्न सक्दैन; ती मसित एउटै मनको भएर सहकार्य गर्दा तिमीहरूले गरेको सेवाका फलहरू हुन्। तिमीहरूका सबै धार्मिक धारणाहरूलाई पन्साइदेओ; मेरा वचनहरूको सच्चाइलाई विश्‍वास गर, अनि शङ्कालु नहोओ! म तिमीहरूसित ठट्टा गर्दिनँ; म जे भन्छु मेरो तात्पर्य त्यही हुन्छ। जसलाई म आशिषहरू प्रदान गर्छु, तिनीहरूले यसरी ती पाउँछन्, जबकि जसलाई म आशिषहरू प्रदान गर्दिनँ, तिनीहरूले केही पनि पाउँदैनन्। यो सबै मद्वारा निर्धारित हुन्छ। सांसारिक सम्पत्ति साँच्‍चै महत्त्वहीन छ! मेरो विचारमा, यो केही नभई गोबर मात्र हो, त्यसको एक पैसाको जति पनि मोल हुँदैन। त्यसकारण, तिमीहरूले सांसारिक सुखचैनलाई अति धेरै मूल्य दिनु हुँदैन। के मसित स्वर्गीय आशिषहरूमा आनन्दित हुनु योभन्दा धेरै अर्थपूर्ण र फलदायी हुँदैन र?
यसभन्दा पहिले, सत्यता प्रकट गरिएको थिएन, अनि म खुल्लमखुल्ला देखा परेको थिइनँ; त्यो बेला, तिमीहरूले मलाई शङ्का गर्यौ अनि मेरो बारेमा सुनिश्चित हुने साहस गरेनौ। तैपनि, अब सबै कुराहरू प्रकट गरिएका छन्, अनि म धार्मिकताको सूर्यको रूपमा प्रकट भएको छु—त्यसैले यदि तिमीहरू अझै पनि शङ्कामा छौ भने, के भन्ने र? जब अन्धकारले पृथ्वीलाई ढाक्यो, तब तिमीहरूले ज्योति देख्न नसक्‍नु क्षमा दिन योग्य नै थियो, तर अहिले सूर्यले सबै अन्धकार कुनाहरूलाई प्रज्वलित पारिसकेको हुनाले, लुकेको कुरा उपरान्त लुकेको छैन, र गुप्त कुरा उपरान्त गुप्त छैन—यदि तिमीहरू अझै शङ्कामा छौ भने, म तिमीहरूलाई सजिलैसित क्षमा गर्नेछैन! अहिलेको समय मेरो बारेमा पूर्ण रूपले सुनिश्चित हुने समय हो, आफैलाई मेरो निम्ति अर्पण गर्न इच्छुक हुने र सुम्पने समय हो। ज-जसले मलाई अलिकति पनि विरोध गर्छ, तिनीहरूमाथि एकै छिन समेत सोचविचार नगरी वा एकै छिन पनि ढिलाइ नगरी तुरुन्तै न्यायको आगो झर्नेछ—किनकि अहिले निर्दयी न्यायको समय आएको छ, अनि जसको मन र हृदय ठीक छैन, तिनीहरूमाथि न्याय छिटो आइपर्नेछ। “मेरो काम चम्किलो बिजुली जस्तै हो” भन्नुको साँचो अर्थ यही हो।
यो छिटो अगि बढ्दैछ; यसले मानिसहरूलाई आश्चर्यमा नपारी रहन सक्दैन, यसले मानिसहरूलाई भयभीत नबनाई रहन सक्दैन, यसलाई अझ लामो समय ढिलाइ गर्न सकिँदैन, र यसलाई रोक्‍न सकिँदैन। जति बढी मेरो काम पूरा हुन्छ, यो त्यति नै छिटो अगि बढ्छ, जो-जो जागा र तयार छैनन्, तिनीहरू सधैँ फ्याँकिने खतरामा हुन्छन्। तिमीहरू उपरान्त परीक्षाको आवेगमा पर्न सक्दैनौ। मेरो काम पूर्ण रूपले सुरु भएको छ र अन्यजाति देशहरू र सारा संसारमा फैलिरहेको छ। न्यायको आगोहरू निष्ठुर छन् र यसले कसैप्रति कुनै दया वा प्रेम देखाउँदैन। परमेश्‍वरप्रति वफादार हुने, तापनि बेठीक विचारहरू र धारणाहरू पाल्‍ने वा अलिकति समेत विरोध गर्नेहरूलाई पनि न्याय गरिनेछ; यसमा कुनै शङ्का छैन। जसमाथि मेरो ज्योति पर्नेछ, तिनीहरू ज्योतिभित्र जिउनेछन् अनि तिनीहरूले ज्योतिमा काम गर्नेछन्, र तिनीहरूले अन्तिम बिन्दुसम्मै मेरो सेवा गर्नेछन्। जो ज्योतिभित्र जिउँदैनन्, तिनीहरू अन्धकारमा जिइरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई न्याय गरिसकेपछि म तिनीहरूको आफ्‍नो पछुतो सम्‍बन्धी तिनीहरूका आफ्‍नै आचरणहरूको आधारमा निर्णय गर्नेछु।
मेरो दिन आएको छ। “मेरो दिन” जसको बारेमा मैले उल्लेख गरेँ, त्यो अहिले तिमीहरूको आँखा सामु छ, किनकि तिमीहरू मसँगै तल ओर्लेका छौ। म तँसँग छु, तँ मसँग छस्; हामी आकाशमा भेटेका छौँ, र हामी सँगै महिमा सहभागी हुनेछौं। मेरो दिन वास्तवमै पूर्ण रूपले आएको छ!
अघिल्लो: अध्याय ५१
अर्को: अध्याय ५३